Madaxweynaha Soomaliya oo midnimo ku baaqay xilli lagu jirey shir nabadgelyada ku saabsan - Sabahionline.com
Madaxweynaha Soomaliya oo midnimo ku baaqay xilli lagu jirey shir nabadgelyada ku saabsan Maarso 23, 2012
Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa Khamiistii (22-ka March) Soomaalida ugu baaqay in ay midoobaan oo ay kaalin firfircoon ka qaataan mustaqbalka dalka, Idaacadda Bar-Kulan ee ay QM maalgeliso ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
6 tuhane oo ka tirsan al-Shabaab oo lagu qabtay Beled Xaawo
Axmed ayaa ka hadlayey shir ka dhacay degmada Xamar Jajab oo looga wada hadlayey nabadda magaalada. Wuxuu muwaaddiniita ku boorriyey in ay u midoobaan si ay u gaaraan danta guud ee ah in laga baxo mashaakilka, waxaanu sheegay in bulsho midaysan keliya ay ka bixi karto mashaakilka haatan taagan, idaacadda ayaa sidaa werisay. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Maxamed Axmed Tarsan iyo saraakiil kale oo sarsare ayaa kulanka ka qaybgalay iyadoo uu Tarsan carrabka ku adkeeyey doorka ay bulshadu ka qaadan karto nabad dalka oo dhan laga aslaaxiyo. Ma jeclaysatay maqaalkan?
March 24, 2012 @ 11:23:02PM
Waxa jiray wadahadalo dhexmaray kooxaha kala duwan ee ku dagaalamaya Soomaaliya gudaheeda. Kooxahani waxay ku jireen iska horimaad joogta ah labaatankii sannadood ee u dambeeyay, waxaana kooxahaasi ka koobanyihiin qabaa’il iyo kooxda alshabaab ee xag jirka ah iyo xukuumadda. Kooxahani dhamaantood waa wada kursi doon ah laakiin waa in ay bartaann inay si dhibla’aan ah kuwada noolaadaan. Sida kaliya ee Soomaliya loogu heli karo nabadgelyo dhab ah iyo barwaaqo waa iyadoo wadahadal nabdoon la galo. Qaramada midoobay waxay isku dayaysaa in ay dhexdhexaadiso wada hadallada nabadeed, laakiin dhibaatadu waxa weeyaan in kooxahani ay kulligood wada doonayaan oo hunguri ka hayo inay kursi helaan. Waxa dhici karta in isku daygani qaato waqti dheer, sababtuna waxa weeye waa ay adagtahay in lala xaajoodo argagixiso, laakiin way isku dayayaan, waana suuragal in ay dhammaadka guulaystaan.